Dastabej » धान उत्पादन पाँच वर्षयताकै कम, कुन प्रदेशमा कति उत्पादन घट्यो ?
धान उत्पादन पाँच वर्षयताकै कम, कुन प्रदेशमा कति उत्पादन घट्यो ? – Dastabej
धान उत्पादन पाँच वर्षयताकै कम, कुन प्रदेशमा कति उत्पादन घट्यो ?
काठमाडौँ । यस धान उत्पादनमा ५ वर्ष यताकै कमी आएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले विगत पाँच वर्षयताकै धान उत्पादनमा कमी आएको जनाएको हो ।
यस्तै आव २०७६÷७७ मा ५५ लाख ५० हजार ८७८, आव २०७५÷०७६ मा ५६ लाख १० हजार र २०७४÷७५ मा ५१ लाख ५१ हजार ९२५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा मन्त्रालयले यसवर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरेता पनि धान थन्काउने बेलामा नै वर्षा र हावाहुरीका कारण धानमा क्षति पुग्दा उत्पादनमा कमी आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो ।
कुन प्रदेशमा कति उत्पादन
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार लाख ४१ हजार ९१३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको हो । गत आवको तुलनामा ३१।४९ प्रतिशतले उत्पादनमा कमी आएको छ ।
यस्तैगरी लुम्बनी प्रदेशमा १८।३८ प्रतिशत, प्रदेश नं १ मा ९३ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा ५।२४ प्रतिशत
बागमती प्रदेशमा ०।३५ प्रतिशत र कर्णालीमा ८।७६ प्रतिशतले उत्पादनमा कमी आएको छ । प्रदेशगत रुपमा धान उत्पादनको अवस्था हेर्दा गत आवको तुलनामा
यसवर्ष गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा धान उत्पादन घटेको छ । चालू आवमा गण्डकी प्रदेशमा मात्र २।३३ प्रतिशतले धान उत्पादनमा वृद्धि भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसवर्ष धान रोप्ने समयमा नै मनसुन सक्रिय हुँदा १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको थियो ।
१९ पुष २०७८, सोमबार १२:४६ प्रकाशित